संबिधानले ग्यारेण्टी गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवास अधिकारलाई स्थापित गर्न ज.. .. .. …
उदयपुर , कात्र्तिक १
उदयपुर प्रहरीद्धारा आमाछोरी हत्यामा संलग्न एक युवालाई बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेमा साबिक सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नम्बर ८ घर भई उदयपुर स्थित त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मोतिगडा बसी मिठाइ पसल गरी वस्ने वर्ष ४० को रामहरि साह रहेको जिल्ला प.. .. .. …
मगर जाति र माघेसंक्रान्ति
नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र भौगोलिक विविधता भएको देश हो । नेपालमा १२५ भन्दा बढी आफ्नै छुट्टै पहिचान भएका जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ । त्यसैले हामी अनेक थरीका भाषा बोल्छौं । अनेक थरीका धर्म मनाउँछौं । अनेक थरीका चाडवर्प र जात्
आधुनिक विश्वमा विकसित राष्ट्रहरुको विकास प्रकृया औधोगिक उत्पादनमा नै निर्भर रहेको छ । नेपालमा औधोगिक विकासको क्रम धेरै पहिले देखि प्रारम्भ भएको हो । तथापी यस्को अवस्था सन्तोषजनक छैन् । नेपालमा विकासको सुरुवात सात दशक अघिदेखि भएता पनि गति यति सुस्त छ कि अझ पनि हामिले कृषि माथिको न.. .. .. …
सर्पले टोक्यो ?यी लक्षण हेरेर चिन्नुहोस् टोक्ने सर्प विषालु हो कि होइन
काठमाडौं १२ श्रावण । वर्षातको समयमा सर्पले टोक्ने जोखिम निकै बढी हुन्छ । तराईका अधिकांश क्षेत्रमा त यो खतरा निकै बढी हुन्छ । सर्पले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नको लागि शत्रुलाई टोक्ने गर्छ । तर, टोक्ने सबै सर्प विषालु हुँदैनन् । यदि सर्पले टोकिहाल्यो भने त्यो सर्प विषालु हो वा होइन भनेर विभ.. .. .. …
मानीस हरायको सुचना !
उहाँको नाम जय बहादुर राइ हो । स्थायी ठेगाना त्रियुगा नगरपालीका १० बोक्से बाह्घरे रेडियो त्रियुगा नजिक उहाँ मंगलबार बिहान ८।३० देखी हराइरहनु भएको छ । हाफपाइन्ट र टिर्सट लगाएर घरबाट निस्कनुभएका राइको हाल सम्म केही पत्ता लाग्न सकेको छइन कृपया देख्नुहुने महानुभावले नजिकैको प्रह.. .. .. …
२६ वर्षपछि नेपाल बुढाबुढीको देश
काठमाडौं, चैत ५ – नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण ‘ढल्दो उमेरको समाज’ हुँदै आगामी तीन दशकमा देश ‘वृद्ध समाज’ मा रुपान्तरण हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले .. .. .. …
यी महिला सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरेकै कारण जेल जानुपर्‍यो
एजेन्सी । सायद यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुहुनेछ किनकी तपाई पनि बेलाबेलामा आफ्नो फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहुन्छ । तर तपाईले कहिले सोच्नुभएको छैन होला कि फोटो पोस्ट गरेकै भरमा जेल जानुपर्छ ।
इरानकी एक महिला बडी बिल्डरले आफ्नो फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा.. .. .. …
बजारको सामाग्री प्रयोग गरी स्तनलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ ? डाक्टर खेम कार्कीको जबाफ
स्तन सानो र ठूलो के कारणले हुन्छ ?
हामी संसारमा ७ अरब मान्छेको शरीर पनि ७ अरब प्रकारकै हुन्छ । कोही अग्लो, कोही होचो, कोही मोटो, कोही दुब्लो सबै प्रकारका मानिसहरु यो संसारमा छौँ । स्तनको साईज पनि त्यसै अनुसार बनेको हुन्छ । तपाईको प्रश्न अनुसार कसैको स्तन सानो, कसैको स्तन ठूलो हुन.. .. .. …